Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany Espaina | ny Galaxy Watch Active 2 Androidsis
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana ny Galaxy Watch Active 2
Eder Ferreño | | Samsung, SmartWatch
Aogositra voalohany natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny famantaranandro Samsung vaovao. Miresaka isika, mazava ho azy, an'ny Galaxy Watch Active 2, ny taranaka faharoa amin'ity smartwatch avy amin'ny marika Koreana ity. Hatramin'ny nanolorana azy tamin'ny volana aogositra, tsy misy fantatra intsony momba ny fandefasana ity famantaranandro ity amin'ny tsena toa an'i Espana. Tsy nilaza na inona na inona ilay marika, na dia amin'ny tsena sasany aza nandrasana ny fandefasana azy.
Farany, ny Galaxy Watch Active 2 dia miditra amin'ny tsena Espaniôla. Izy io dia efa fanombohana ofisialy izay nohamafisin'ny Samsung tenany ihany, ka mpampiasa maro no azo antoka fa faly amin'ny fahatongavan'ity maodely vaovao an'ny orinasa eto amintsika ity.
Betsaka ny fanehoan-kevitra momba ny fanombohana, nefa izao dia ofisialy. Ary koa, ity famantaranandro avy amin'ny marika Koreana ity dia navoaka tamin'ny kinova isan-karazany any Espana. Satria ny mpampiasa dia afaka misafidy safidy roa misy boaty 44 sy 40 mm ny savaivony. Amin'ny fitaovana samihafa ihany koa, fitaovana roa manokana (aluminium na vy tsy misy fangarony) ary amin'ny karazany roa, WiFI na WiFi + 4G ihany. Safidy maro noho izany amin'ity tranga ity.
Galaxy Watch Active 2: ofisialy ny famantaranandron'i Samsung vaovao
1 Famaritana Galaxy Watch Active 2
2 Vidiny sy fandefasana
Famaritana Galaxy Watch Active 2
Alohan'ny hamelana anao ny antsipirian'ny fandefasana azy eny an-tsena, Izahay dia milaza aminao voalohany ny momba ny pitsipitsony amin'ity Galaxy Watch Active 2 ity, mba hahatsiarovanao ny zavatra navelan'ity taranaka vaovao ity ho an'ny famantaranandro maranitra an'ny marika Koreana. Modely iray manatsara ny lafin-javatra sasany momba ny taranaka voalohany, ankoatry ny fampidirana fiovana vitsivitsy amin'ny endriny. Ireto ny andinindinin'ity smartwatch ity:
Asehoy: 1,4 santimetatra na 1,2 santimetatra Super AMOLED misy vahaolana 360 x 360 pixel
Mpandrindra: Exynos 910
RAM: 1,5 GB (modely LTE ihany) - 768 MB amin'ny ambiny
Tahiry anatiny: 4 GB
Fifandraisana: LTE, WiFi 802.11 b / g / n 2,4 GHz, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, Bluetooth 5.0. NFC
Rafitra miasa: Tizen
Sensors: Electrocardiogram, Accelerometer, Barometer, Gyroscope, Sensor HR, Sensor Illumination
Batterie: 340/247 mah
Fanoherana: MIL-STD-810G raharaha fanoherana miaramila miaraka amin'ny vera Gorilla Glass DX +
Araka ny efa nambara tamin'ny volana Aogositra, iray amin'ireo fiasa lehibe na fanatsarana ao amin'ity Galaxy Watch Active 2 ity dia ny fampidirana ny electrocardiogram. Taorian'ny vokatra tsara nomen'io asa io tao amin'ny Apple Watch, Samsung dia nanapa-kevitra ny hampiditra an'io asa io ao amin'ity taranaka vaovao amin'ny famantaranandrony ity ihany koa. Ka nantsoina ho iray amin'ireo lahasa malaza indrindra izy io, hifehezana tsara kokoa ny fahasalaman'ny mpampiasa ary hanampy amin'ny fisorohana ny olana mety hitranga. Nampidirina ihany koa ny asan'ny detector fall, izay mety manampy be koa amin'ny fotoana maro, hisorohana olana lehibe.
Vidiny sy fandefasana
Raha liana ianao mividy an'ity Galaxy Watch Active 2 ity, azonao atao ny mividy azy io izao any Espana amin'ny fomba ofisialy. Ny famantaranandro dia amidy amin'ny tranokala Samsung ofisialy, ankoatry ny fahafahany mividy azy io koa any amin'ireo magazay hafa, na ara-batana na an-tserasera. Ka ho mora be ny mahita an'ity famataranandro sonia ity any amin'ny magazay, indrindra satria ny fizarana ny vokarin'ny orinasa matetika tsara foana.
Araky ny efa nolazaina teo aloha. mahita kinova maromaro izahay amin'ity Galaxy Watch Active 2. Misy ny kinova miankina amin'ny haben'ny boaty, ny fitaovana ampiasaina ary raha toa ka misy WiFi izany na misy WiFi sy 4G ihany. Ireto ny vidin'ny kinova rehetra amin'ny famantaranandro:
Fampivoarana WiFi 40 mm vita amin'ny aliminioma: 299 euro
Fampivoarana WiFi 44 mm vita amin'ny aliminioma: 319 euro
40mm modely WiFi vita amin'ny vy vy: 399 euro
44mm modely WiFi vita amin'ny vy vy: 419 euro
Fampivoarana 4 mm miaraka amin'ny Wifi + 40G vita amin'ny vy tsy misy fangarony: 449 euro
Fampivoarana 4 mm misy WiFi + 44G vita amin'ny vy tsy misy fangarony: 469 euro
Amin'ny ankapobeny dia afaka mahita ny zava-drehetra isika kinova an'ity Galaxy Watch Active 2 misy any Espana ity. Azonao atao ny misafidy ny iray mety indrindra amin'izay tadiavinao amin'ny tranga manokana. Ahoana ny hevitrao momba ity fanombohana ny famantaranandro Samsung vaovao ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana ny Galaxy Watch Active 2
Ny Redmi 8 dia efa manana daty fampisehoana voamarina
Samsung dia manamafy ny daty fandefasana ny Galaxy Fold any Espana